Kureva Kutsvaga Keyword kune Toll Mahara Nhamba
Kuchengeta SEO Shanduko nefoni
Svondo, July 11, 2010 Chipiri, Zvita 18, 2012 Douglas Karr
Isu tinofara kuve nemutengi mutsva mwedzi uno anoita kumwe kushambadzira kwakakura mune zvetsika midhiya. Neredhiyo, terevhizheni uye yakananga tsamba, nzira yakajairika yekutevera mushandirapamwe ndeyekupa koponi kodhi kana kodhi yekudzora inoenderana zvakananga kumashure kune kupihwa.
Nekudaro, nemabhizinesi ane dhipatimendi rekupinda parunhare, nzira yekutanga inoshandiswa kutenga mabhanga e nhamba dzenhare dzenhare uye shandisa imwe nhamba yefoni pamushandirapamwe wega wega. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti yakakwira muzana yevashanyi vewebhu vanozofona pane kusangana nekambani nefomu kana email (40% pakutsvaga kwenzvimbo).
Uyu mutengi ane hukuru hwewebhu huvepo uye isu tatova nekuwedzera kushanya kune yavo saiti kune imwechete kiyi kiyi ne15% mumazuva asingasviki makumi matatu. Kuwedzera kwekushanya kwakanaka, asi isu tinofanirwa kukwanisa kunongedza traffic kune chaidzo shanduko. Mutengi wedu anofanirwa kuziva kuti iyo yekutsvagisa injini yekutsvaga iri kuwedzera madhora kune yepazasi mutsetse. Mhinduro ndeyekuroora nzira mbiri idzi ... yekutsvagisa injini yakanangidzirwa kune yakanangana nhamba dzisingabhadhari.
Tags: kufona kwekuteverakudananhamba dzesimba dzenharefoni yekuteveraSearch Engine Optimizationseo
Ndatenda-iwe Blogger! DMCA Chekunyunyuta
Vaka Chivimbo Nekutaura HAPANA!
Jul 12, 2010 pa 8: 11 AM
Doug, ndinoziva kambani ine nhamba imwe chete yefoni asi inowedzera yakapfava "Bvunza Amy" kana "Bvunza Jim" kunhamba yavo yemahara yefoni kutumira. Iko hakuna Amy kana Jim pakambani asi kana vakapindura vanongoteerera kuti izita ripi rinobvunzwa nevanhu vobva vati iye / haapo pano izvozvi asi ndinogona kukubatsira. Zviripachena kuti zita rinoratidza mushandirapamwe urikupindurwa nevanhu.
Chinhu chimwe chete ichocho chinoshanda nekuwedzera kwekunyepedzera. Fonera 800-555-5555 x3542. Iko hakuna kuwedzerwa 3542 asi inokuudza zvese zvaunoda kuti uzive.
Jul 12, 2010 pa 10: 34 AM
Isu taimboita zvakafanana neDirect Mail, Patric! Isu taisayina mabhii ane zita rekunyepedzera uye zita - wobva washandisa izvo kuteedzera mushandirapamwe uye kupa. Mumazuva ano ekuda kujekesa, ndine chokwadi kuti maitiro akajairika haazokosheswe zvakanyanya ikozvino.
Jul 14, 2010 pa 10: 33 AM
Yakakura posvo Doug. Isu tanga tichishandisa akasiyana eiyi nzira: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
kwechinguva. Iri zano rakakura uye rinobatsira kuratidza kukosha kwako kune vatengi zvakanyanya nyore. Zvakakodzera kuti utarise iwo script uye Twilio kune avo vanoshandisa izvi vega.